Agaasimaha Isdhexgalka Barnaamijka
Erin Imon Gavin waxay u adeegtaa door isku -dhafan sida agaasimaha isdhexgalka barnaamijka McKnight. Erin waxay hagtaa shaqo gudaha ah si ay u abuurto isku xirnaan ka sii badan dhaqammada McKnight dhammaan aagagga barnaamijkeenna waxayna maamushaa mashaariic gaar ah oo dhex mara aagag barnaamijyo badan.
Erin waxay ku biirtay Aasaaska iyada oo ah sarkaalka barnaamijka 2013. Waxay maamushay Hindisaha Aasaaska Dugsiyada Jidka-dadaal dhinacyo badan leh si loo wanaajiyo baridda, hoggaaminta, iyo natiijooyinka akhriska fasalka PreK-3 ee toddoba degmo oo Degmooyinka iyo iskuullada charter-ka ah. Ka-baxsan hindisaha, Erin waxay iskaashi la sameysay koox kala duwan oo aan macaash doon ahayn, dowladda, tacliinta sare, iyo daneeyayaasha PreK-12 si ay u bilaabaan hindisayaal loogu talagalay in lagu hagaajiyo xoogga carruurta carruurnimada hore ee Minnesota iyo taageeridda barayaasha luqadda. Kahor intaan loo gudbin barnaamijka Vibrant & Equality Communities, waxay dusha kala socotey hirgelinta xeeladaha McKnight si loo diyaariyo, loo shaqaaleeyo, loona hayo barayaal wax ku ool ah oo kala duwan iyo in sare loo qaado codka qoysaska iyo bulshooyinka siyaasadda waxbarashada.
Erin waxay shaqadeeda ka bilowday fasalka iyada oo ah macallin iyo dhex -dhexaadiyaha akhris -qoraalka ee Dugsiyada Dadweynaha ee Brooklyn Center. Waxay ka qalin jabisay Kulliyadda Carleton, waxay dhammaysay shahaadada mastarka ee siyaasadda waxbarashada ee Jaamacadda Harvard, waxayna ka heshay jaamacadda Vanderbilt Doctorate-ka Hoggaanka Waxbarashada iyo Siyaasadda K-12. Erin waa qof jecel St. Paul-ite, halkaas oo ay kula nooshahay ninkeeda, carruurteeda, iyo eyda.
By Erin Imon Gavin, Rashad Turner, Bill Graves, DeSeandra Sheppheard, Patrice Relerford Juun 2018
By Erin Imon Gavin Abriil 2015